UJoe Abercrombie: ubaba weSaga Umthetho Wokuqala | Izincwadi Zamanje
Ukucaphuna kukaJoe Abercrombie
UJoe Abercrombie ungumbhali waseBrithani ofaneleke njengomunye wabakhi abakhulu bohlobo lwenganekwane. Kusukela kwethulwa i-trilogy yakhe La Umthetho Wokuqala kuze kube manje sekudale isiyaluyalu esikhulu emibhalweni yamaphupho. Sibonga u Izwi lezinkemba (2006) -isici sakhe sokuqala- waqokwa eminyakeni emibili kamuva kwi-John W. Campbell Award for Best New Writer.
Isitayela sakhe sibonakala ngokunwetshwa kwezinhlamvu eziyinkimbinkimbi kakhulu futhi ezihlelwe kahle, ezivumelana ngokuphelele neqiniso. Mayelana, umbhali uqhubeka athi: “Bengifuna kakhulu ukugxila kubalingiswa ngangokunokwenzeka futhi ngigcine isimo, ifreyimu ngemuva. Ngakho-ke, ukwakhiwa komhlaba engijwayele ukukwenza kugxile ngaphakathi ”.
1 Izincwadi zikaJoe Abercrombie
1.1 I-Saga Yomthetho Wokuqala
1.1.1 Izwi lezinkemba (2006)
1.1.2 Ngaphambi Kokukulengisa (2007)
1.1.3 Impikiswano Yokugcina Yamakhosi (2008)
1.2 Ukuphindisela Okuhle (2009)
1.3 Amaqhawe (2011)
1.4 Inkathi Yobudlova Saga
1.4.1 Inzondo Encane (2019)
1.4.2 Inkinga yokuthula (2020)
1.4.3 Ukuhlakanipha kwezixuku (2021)
2 Mayelana nomlobi, uJoe Abercrombie
2.1 Isebenza nguJoe Abercrombie
Izincwadi zikaJoe Abercrombie
Saga Umthetho Wokuqala
Umthetho Wokuqala uchungechunge lwamanoveli amathathu, olwenzeka emhlabeni omuhle. Kulezi zindaba I-Briton ihlanganise "inganekwane yakhe yakudala," indlela eyamthatha iminyaka ukuyakha nokuyithuthukisa. U-Abercrombie uthi bekufanele ifake izinto ezibalulekile, ezinjengalezi: "... imibhoshongo yemilingo, imibuso ehloniphekile ebhekene nezimo ezingenakwenzeka, amadolobha amahle ...".
Izwi lezinkemba (2006)
Yileveli eyethula umhlaba womlingo owenziwe ngumbhali. Lokhu kusekelwe kakhulu ekwethulweni kwezinhlamvu zayo, zombili ezinkulu nezesekondari. Ngaphezu kwesakhiwo esimnandi, kuthintwa izingqikithi ezahlukahlukene, njengezimpi nezingxabano zezepolitiki, ukuhlukunyezwa nonya oluzungeze uMbuso waseGurkhul; konke okuthinta amahlaya amnyama.
Izwi Lenkemba: I ...
Ngaphambi kokuba bazilengise (2007)
Lesi sitolimende siqhubeka nendaba eyayimisiwe ekulandiseni kokuqala. Kuyena futhi kunesimo esibi nesingenabuntu semizabalazo yokuvikela idolobha laseDagoska. Abalingiswa bayo abaphambili — uGlotka, uLogen, uBayaz, uFerro, uNtshonalanga noHound—, kanye namanye amalungu amasha, benza uhambo olubalulekile futhi baqhuba izimpi ezinzima belwa namadoda asenyakatho aholwa yiBethod.
Impikiswano yokugcina yamakhosi (2008)
Kuyingxenye yokugcina yochungechunge. Kuyo ukulwa okuqinile eNyakatho kuyaqhubeka, ngenkathi IGlotka ilungiselela ukhetho lwenkosi entsha. Abalingiswa basemzabalazweni oqhubekayo wokuphila endaweni enegazi nenenzondo. Kulesi sitolimende umphumela unikezwa okungenhla futhi izinhloso zangempela zalabo abangenelela kuwo wonke umlando ziyavezwa.
Impikiswano yokugcina ye ...
Impindiselo enhle kakhulu (2009)
UMonza Murcatto — INyoka YamaTalins— Uyi-mercenary wonke umuntu okholelwa ukuthi ufile ngemuva kokukhashelwa empini. Kodwa-ke, yena buyela ekuziphindiseleni ngqo ezitheni eziyisikhombisa, engeke amhawukele. Ukwenza lokhu, hamba uye emadolobheni ahlukahlukene eSytria (izindawo ezifana ne-Italy yangezikhathi zakudala ezigcwele abathengisi nabasiki bezinkemba, nalapho kunengozi khona).
Impindiselo enhle kakhulu
Kule noveli yesihlanu, u-Abercrombie ubuya nemizabalazo eseNyakatho. Indaba ifakwe inkanyezi ngu Imnyama emnyama, umqaphi waleyo ndawo. EMpumalanga ibhekene nempi enzima neNyunyana - Iqembu laseNingizimu - abafuna ukuthatha insimu ngazo zonke izindlela. El violento Ukungqubuzana kwenzeka ezinsukwini ezintathu ezinegazi, ichazwe ngokuningiliziwe ngumbhali.
Saga Iminyaka yokusangana
Le trilogy yakamuva kakhulu ye-Abercrombie. Embhalweni ubuyela endaweni yonke yemilingo eyenziwe ku Umthetho Wokuqala, kuphela ukuthi isenzo senzeka eminyakeni engama-30 kamuva. Umlando umelwe yinzalo ye- yisakhiwo sodumo abalingiswa abavela ezindabeni zokuqala. Futhi, esakhiweni izingxabano ezinamandla nezinonya zenzeka phakathi kweNyakatho neNyunyana; kodwa-ke, kulokhu impi ingeyendawo eseningizimu.
Inzondo encane (2019)
Ngemuva kwenguquko yezimboni, imishini yathatha ingxenye yomsebenzi owenziwa ngezandla. Yize lokhu sekuthuthuke e-Adua, abaningi bayakwenqaba futhi bahlala bethembekile ezindleleni zabo zemilingo. Ngesikhathi esifanayo, Kulwelwa izimpi ezisabekayo phakathi kweNyakatho neNyunyana, kodwa ngezinye izinhloso. Kukhona ama-protagonists amasha, kufaka phakathi: Leo dan Brock, Prince Orso, Stour Ocaso no Savine dan Glokta.
Inzondo encane (Runes)
Inkinga yokuthula (2020)
Embuthanweni Womhlaba kunesivumelwano sokuthula esibuthakathaka. Ngokwengxenye yayo, inkosi esencane kumele ibhekane nobuholi bayo ngokunakekela, ngoba wonke umuntu ufuna ukusizakala ngokungabi nalwazi kwabo. U-Leo no-Stour Ocaso bakhathazekile futhi abazehlisi, balindele ngaphambi kwalesi sikhathi ngaphandle kokuphikisana. Futhi bobabili uSavine noRikke banezikhathi ezibalulekile ezimpilweni zabo. Bonke abalingiswa bahlangabezana nezinguquko ezinkulu nezibalulekile.
Inkinga yokuthula: I ...
Ukuhlakanipha Kwezixuku (2021)
Kuyisitolimende sokugcina se-trilogy Iminyaka yokusangana; ukukhishwa kwayo kwesiNgisi kwamenyezelwa ngoSepthemba 2021. Izivumelwano zokuqala yethulwe njengesandulela senoveli phikisana nesiqalo sempikiswano enkulu eyayiphuza phambilini. Abalingiswa bayo abakhulu bayinhloko yezinguquko zeqiniso elisha, lapho yonke into iwa khona.
Mayelana nomlobi, uJoe Abercrombie
Umbhali uJoe Abercrombie wazalwa ngoDisemba 31, 1974 edolobheni laseLancaster, e-United Kingdom. Le nsizwa yafunda eLancaster Royal Grammar School yabafana. Ngaleyo minyaka, abaseBrithani ibonakaliswe ngokuba nekhono ngemidlalo yevidiyo nokuba nobuciko obuhle nemicabango, izimfanelo azibonakalisa ngemidwebo namabalazwe ayinkimbinkimbi okuqanjiwe.
Ngemuva kokuphothula izifundo zakho zesibili, Wabhalisa e-University of Manchester, lapho afundela khona Psychology. Ngemuva kokuphothula iziqu, waya eLondon; Lapho wasebenza endaweni yokukhiqiza okuthunyelwe kwethelevishini. Lesi sipiliyoni simholele ekusebenziseni ngokuzimela ukuhlela izinto ezilalelwayo nokubukwayo. Ngaleso sikhathi wenza amavidyo kliphu ngeColdplay, The Killers noBarry White, phakathi kwabanye.
Ngo-2002, waqala ukubhala inoveli yakhe yokuqala yezinganekwane, eyaphela eminyakeni emibili kamuva. Kwakungathi Izwi lezinkemba. Yize umsebenzi wawukulungele ukwethulwa ngokushesha nje lapho usuphelile, u-Abercrombie kwadingeka alinde iminyaka emibili (2006) ngaphambi kokuba ushicilelwe ngokusemthethweni ngabezokushicilela bakwaGollanz. Ngalo mbhalo i-trilogy yaqala Umthetho Wokuqala.
Ngesikhathi esifushane, umbhali uthole ukuqashelwa okubalulekile kwemibhalo, ifinyelela ezindaweni zokuqala ezithengiswayo njengezikhipha uhlobo lwenganekwane.
Ngemuva kokuphothula uchungechunge lwakhe lokuqala, u-Abercrombie wadala izindaba ezine ezizimele, lapho ame ngaphandle: Impindiselo enhle kakhulu (2009) futhi Amazwe abomvu (2012). Ubuye futhi washicilela amanye amasaga abalulekile: The Trilogy of Ulwandle Oluphuliwe (2014-2015) kanye Iminyaka yokusangana (2019-2021). Lesi sakamuva sinikeza ukuqhubeka kwendaba evezwe ezweni lamaphupho le-saga yokuqala.
Isebenza nguJoe Abercrombie
Saga Umthetho wokuqala:
Amazwe abomvu (2012)
I-trilogy yoLwandle Oluphukile:
Inkosi uhhafu (2014)
Umhlaba uhhafu (2015)
Impi uhhafu (2015)
Izindwangu ezibulalayo (2016)
Saga Iminyaka yobudlova:
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Biography » UJoe abercrombie
UClara Peñalver. Ingxoxo nombhali weSlimion